डाक्टर केसीका माग जायज नै हुन् तर, अस्पताल बन्द गरेर गरिब मार्न पाइँदैन् – Halkaro
- प्रमिला कार्की
प्रकाशित मिति : २०७५, ६ श्रावण आईतवार July 22, 2018
सर्वसाधारण त्यी गरिब जनता दिन दिनै मरेका छन्। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैँ ! आखिर जुन सरकार आए पनि हुने केही हैन। काम गर्न नदिने, एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हाबि हुँदा देशमा विकासको मोड हैन बिकटता निम्तिएको छ । आखिर लोकतन्त्र, गणतन्त, समाजवाद जे भने पनि, जे अाए पनि गरिब निमुखा जनताहरूले शासक र शोसकबाट अझै मुक्ति पाउन सकेको छैनन्।
जनताको लागि लडेको भन्दै गरिब जनताका छोराछोरीलाई युद्धको मैदानमा लगेर रगतको खोलो बगाएर आफू सत्तामा पुगेपछि आफ्नो र आफ्ना आफन्तहरुकै भुडी भरेरै कहिले अगाउदैनन् ।
सरकारी अस्पतालमा जादाँ डक्टर र नर्सले बिरामीलाई कस्तो व्यबहार गर्छन त्यो पनि देखिएको छ । केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पतालमा राम्रो सुधार गरेर सेवा दिन नसक्ने सरकारले अन्य क्षेत्रमा अस्पतालको स्थापना गरेर सुबिधा दिन्छ भन्नु पनि एका देशको कथा जस्तै हो ।
आखिर सरकार देखि डक्टरसम्म सबैको नियत गरिब निमुखा जनताहरू मार्ने नै देख्छु म त । अस्पताल जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई युद्धको मैदान बनाएर आखिर डक्टरहरूले के गर्दै छन भनि बुझ्नु जरुरी छ ? त्यी गरिब जनता जसको कहि पहुँच छैन उनीहरु सधै मरिरहेका छन्। हरेक दिन देखिरहेका छौं हामीले ;कहिले पैसाको अभावले त कहिले डाक्टरहरूको लापरबाहीले गर्दा कैयौंले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।
सरकारी अस्पताल भनिन्छ गरिब जनताका लागि तर हैन सरकारी अस्पताल भनेका पावर र पहुँच हुनेका लागि हुन् । त्यही पावर र पहुँचले गर्दा आजको आजै उपचार पाउँछन। मिलेसम्म यतै त नमिले बिदेशमा भए पनि मिलाउँछन् तर सामान्य मान्छे जसको कुनै पावर वा पहुँच हुँदैन उसले सानो भन्दा सानो उपचार गराउन पनि हप्तौं कि त महिनौ धाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमाथि कुनै शल्यकृया गर्नु पर्यो भने त समय लिएर कुर्दा कुर्दै कि त ज्यान गुमाउनू पर्छ कि त अन्य रोगसँगै लड्नुपर्छ। डक्टर देखि ऊक्त अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र ठूलाबडा हुनेखानेका आफन्त तथा इष्टमित्र सबैको पालो सकिएपछि पालो आउने यस्तो शोषकिय प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरूरी देखिन्छ।
यो कस्तो अन्याय ? जनताको लागि भन्दै सरकार देखि डाक्टरसम्म सबैले गरिब जनताहरू नै मारिरहेका छन्। म भन्दिन डाक्टर केसीका माग गलत छन तर उनकै कारणले अस्पताल बन्द गरि सर्बसाधारण जनतालाई दुःख दिनु कहाँ सम्मको न्याय हो यो ?
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्सलगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले बिरामीलाई कस्तो व्यबहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पाठ सिकाइनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। कुनै कुरा नबुझ्दा दोहोर्याएर सोध्दा झर्कोफर्को गरेर बिरामीको मनोबल घटाउने डाक्टर देखि नर्स अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुनु आवश्यक देखिन्छ।
के यो आन्दोलनले कुनै नेता वा धनाड्यका सन्तान तथा आफन्त उपचार नपाएर मरे भन्ने समाचार कही कतै सुनेका छौं हामीले ? छैनौं, किनकी जतिसुकै आन्दोलन किन नहोस् उनीहरु उपचार नपाएर मर्दैनन, मर्ने त आखिर गरिब निमुखा जनता नै हुन ।
← जापानमा अत्याधिक गर्मी ३० जनाको मृत्यु
विश्व हिन्दु महासंघका अध्यक्ष सिंहको निधन →